Saitama စီရင်စုရှိလုပ်ငန်းခွင်အလုပ် - သင်အလုပ်တစ်ခုရှာနေလျှင် [Genvers]
Saitama စီရင်စုတွင်အလုပ်ခွင်တွင်း ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်မှု
တာတို၊ အဒရှီ၊ ဆူမီဒါ၊ အက်ဒိုးဂါဝါ (၅၂)
တာချီကာဝါ၊ ကိုးကူဘွန်ဂျီ၊ Akishima (၄)
အိုမီ၊ အာကီရူနို (၂)
ယိုကိုဟားမား / ကူဆာကီ (34)
ဖူဂျီဆာဝါ၊ ကမာကူရာ၊ ယိုကိုစူလာ (၉)
အက်စူဂျီ / ဟီရာဆူuka (3)
Odawara, Minamiashigara, etc (1)
ဆိုင်တာမာ၊ တိုဒါ၊ ကဝါဂူချီ (၄၂)
ကဝါဂိုး၊ တိုရိုရိုဝါဝါ၊ ဆရာယာ (၂၈)
ချီချီဘို၊ ဟန်းနိုစသည်တို့ (၃)
မatsudo, Kashiwa, Nagareyama (24)
နာရီတာ၊ အင်းစိန်၊ ခရှရှီ (၁၂)
ချီဘာ / အီခီရာရာ / ရှိဂဟာရာ (၁၇)
ရွှေ့ပြောင်း / ဒေသဆိုင်ရာ (2)
Aomori စီရင်စု (၁)
Nagasaki စီရင်စု (၁)
မြေကြီးအလုပ် / အထွေထွေအလုပ်(99)
မှင် / စစ်တမ်း(6)
အိမ်ရာကိရိယာများ / ပရိဘောဂတပ်ဆင်ခြင်း(11)
ခေါင်မိုး / စာရွက်သတ္တုအလုပ်(12)
မီးခံ / insulator တွင်လည်း(3)
ပန်းပဲ / ဂဟေဆော်(6)
အခြားအကြီးစားစက်ကိရိယာများ (တူးဖော်စက်၊ ယumbo၊ mixer)(13)
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကား (အကြီးစား / အလတ်စား, etc)(6)
ဗိသုကာထရပ်ကား (dump truck)(17)
လေယာဉ်အမှုထမ်း (ဘတ်စ်ကား၊ တက္ကစီ၊ မောင်းနှင်ဝန်ဆောင်မှု)(1)
လျှပ်စစ် / ဆက်သွယ်ရေးလုပ်သား(6)
စက်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင် / ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု(14)
ညီလာခံ / အပြောင်းအလဲနဲ့(1)
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ / ဗိသုကာ (205)
ကန်ထရိုက်တာ ၀ န်ထမ်း (၁၀)
အသစ်ရောက်ရှိ / အရေးပေါ်စုဆောင်းမှု
Field Jobs Genvers
Saitama စီရင်စုတွင် site ပေါ်တွင်စုဆောင်းမှု
[၉၂ တင်တင်ဆက်မှု] Saitama စီရင်စုနယ်ပယ်တွင်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်ခေါ်ယူခြင်း။ဆောက်လုပ်ရေး၊ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကထားသောအလုပ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။သင်၏လက်၌အလုပ်တစ်ခုရပြီးသင်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုကိုတိုးပွားစေပါ။Links Co. , Ltd. - Home Doctor 94-, Nanami Construction Co. , Ltd. စတာတာစီရင်စုတွင်အလုပ်ခွင်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
[Koshigaya City] အလုပ်အကိုင်အမဲလိုက်အထောက်အပံ့!မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့်ယာဉ်မောင်း
[Yashio City] အတွင်းပိုင်းဖျက်သိမ်း Saitama Yashio ㈲ Issei Kogyo
94 ကိစ္စSaitama စီရင်စုတွင်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ရှိသည်။ (၁-၃၀)
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၁ မှ ၃၀ / အမှု ၄၆ မှု
Links ကုမ္ပဏီလီမိတက် - နေအိမ်ဆရာဝန် ၁၁၉-
[လစဉ်လစာ ၃၅၀,၀၀၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောလစာ] စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်သော၊ ရေစိုခံလက်မှုပညာရှင်များနှင့်ပန်းချီဆရာများလုပ်နိုင်သောခေါင်မိုးလူသစ်စုဆောင်းခြင်း!
# ကျွန်ုပ်တို့၏လစာစနစ်သည်လုပ်သက်စီနီယာအခြေခံသည့်လစာစနစ်မဟုတ်ပါ။ [အတွေ့အကြုံရှိသူများ] လစာသည်“ အခြေခံလစာ” +“ ရာခိုင်နှုန်းလစာ” ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကို ကျေးဇူးပြု၍ အသုံးပြုပါ။အကယ်၍ သင့်အား site ကြီးတစ်ခုအပ်နှင်းထားပါကသင်အလွန်များပြားစွာရနိုင်သည်။ [အတွေ့အကြုံမရှိသူများ] သင်ခြစ်ရာမှစတင်သော်လည်းသင်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်လျှင်သင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သည့်ငွေပမာဏသည်သင်၏လစာတွင်ပိုပိုပြီးထင်ဟပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ငါတို့သည်သင်တို့၏လှုံ့ဆျောမှုတန်ဖိုးထား!
ကန ဦး လစာ 30 ကျော်
[ခေါင်မိုးဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေစိုခံဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း] ၀ န်ထမ်း
・ လစဉ်လစာ ၃၅၀,၀၀၀ ယန်း + ကော်မရှင် (*) ・ သင်တန်းကာလ (ယန်း ၂၈၀,၀၀၀ ~) * စာချုပ်ကြေး၏ ၅% သည်ကော်မရှင်ဖြစ်သည်။
[ရုံး] ၁-၂၅-၂၉ Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo Centre ၂၃ ရပ်ကွက်နှင့်အတူစီရင်စုသုံးခုစလုံး
Lynx Co. , Ltd. - Home Doctor 119-Jobsဟုတ်လား
★☆စုဆောင်းမှုနှုန်း 1.25% ☆★မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာအလုပ်သမားများ experience အတွေ့အကြုံမရှိ, အတွေ့အကြုံရှိလူများအဘို့အထူး ဦး စားပေးကုသမှု★စျေးပေါ, အဆောင်ချက်ချင်းထေို, အစားအစာများ, နေ့လယ်စာသေတ္တာပါဝင်သည်★★ 1.81 မှ XNUMX ယန်း◇ခင်းခင်း, ရေနှင့်မိလ္လာ, ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း◇စိတ်ကျရောဂါကြောင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများသို့စိတ် ၀ င်စားမှုရှိစေရန်နှင့်တည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေအတွက် "လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု" ကိုအဓိကထားပါ
လူတိုင်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ထင်တယ်။ဒီမှာပါကအေးမြ!မင်းလုပ်လို့ရလား !!ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိပါဘူးသင်၏အရေးကြီးသောဘဝကိုထောက်ပံ့သောအလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နေခြင်းကြောင့်သတိထားပါ။၎င်းသည်တစ်သက်တာအတွက် "သင်၏လက်၌အလုပ်" ရရှိရန်သင့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။သငျသညျအတွေ့အကြုံမရှိရင်တောင်, "လှုံ့ဆျောမှု" နှင့် "စိတ်အားထက်သန်" သူမြားကြှနျုပျတို့သညျအစအ ဦး ကနေ back up လိမ့်မည်။ယခုမှစ။ "လက်၌အလုပ်များ" အရေးကြီးသောအချိန်ကာလတစ်ခုပါ!ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "အလုပ်လွယ်ကူခြင်း" ကြီးမားတဲ့အချက်ပါ!၎င်းသည်အကျိုးရှိစေသည့်ကောင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။၄ င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်းများမှသာရိုးသားပြီးစိတ်ချရသောအလုပ်ရှိသည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊
[ကုမ္ပဏီ] မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်သားများ၊ လက်ထောက်
[ကုမ္ပဏီ] နေ့စဉ်လစာငွေယန်း ၁၂၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ယန်း (လစာလစာ) ★အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သည်။ ခိုင်မာသော ၀ င်ငွေရလိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းများစွာအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
Kawagoe, Tokorozawa, Sayama
အဓိကအားဖြင့်တိုကျိုနှင့်၎င်း၏ဆင်ခြေဖုံး [Wako အရောင်းရုံး] Shimoniikura မှ, ငါတို့အတူတကွစုဝေးခြင်းအားဖြင့် site ကိုမှ ဦး မည်
Nanami Construction Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
Koshigaya, Soka, Misato
Beth Tee Co. , Ltd. ဂျော့ဘ်ဟုတ်လား
[စက်ရုံအလုပ်သမားများ] [ယာဉ်မောင်းအမျိုးမျိုး] [အရောင်း ၀ န်ထမ်းများ] ဂေဟစနစ်အားစိတ်ဝင်စားသူများကိုအာရုံစိုက်ပါ။ပြန်လည်အသုံးပြုမှုပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုအဆိုပြုသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခု! [အသစ်တည်ဆောက်ထားသောအဆောင်ခန်း]
[စက်ရုံရှိအလုပ်သမားများ၊ ယာဉ်မောင်းများ၊ အရောင်း ၀ န်ထမ်းများရှာဖွေခြင်း] !!သူတို့ကိုဂရုစိုက်ပြီးတစ်နေရာရာမှာနွေးနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အလုပ်ခွင်တွင်ယာဉ်မောင်း၏အလုပ်မှာအထီးကျန်နေပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောမောင်းနှင်မှုနှင့်အချိန်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသတိပြုရန်ဖိအားများစွာရှိသည်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်ပြန်လုပ်တော့ "ပြန်လာပါရစေ။ " "နောက်ကျသွားပြီ။ မင်းငါ့ကိုမေးရင်ငါပျော်ရွှင်လိမ့်မယ် ... ဆုလာဘ်တွေ ၀ င်ငွေအပြင်ရနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ [ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းများဤတွင်ပါ] your သင်၏အရည်အချင်းများကိုအသုံးချရန်ခွင့်ပြုသည့်အလုပ်ပါအကြောင်းအရာ။live သွက်လက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောနေရာလေးဖြစ်သည်။your သင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးကိုလုပ်လျှင်ဝင်ငွေပိုရလိမ့်မည်။
★စက်ရုံအလုပ်သမားများ★① ～ ⑥ယာဉ်မောင်းများ (dump ကုန်တင်ကားများ၊ လေးလံသောစက်ကိရိယာများ၊ ယူနီကွန်တိန်နာ) ★အရောင်းဝန်ထမ်းများ★စာရေးဆရာများစသဖြင့်
★နေ့စဉ်လစာ [စက်ရုံအလုပ်သမား] ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ ★လခ [ယာဉ်မောင်း] arge ကြီးမားသောကားတစ်စီး / ယန်း ၃၅၀၀၀၀ မှ ၄၅၀,၀၀၀,၀၀၀eအကြီးစားစက်ပစ္စည်းအော်ပရေတာ / ၃၀၀,၀၀၀ - ၃၅၀ ...
Kuki, Kumagaya, Honjo
[Ageo ECO Centre] 1119-1 Ryoke, Ageo City, Saitama စီရင်စု * JR Takasaki လိုင်းပေါ်ရှိ "Kita-Ageo ဘူတာ" နှင့် "Okegawa ဘူတာ" မှကားဖြင့်
Uchida Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
TRY HOUSE Co. , Ltd. မှအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုဟုတ်လား
Kawase Juku Co. , Ltd.
စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုကြောင့်ဝန်ထမ်းများတိုးလာသည်။အတွေ့အကြုံမရှိသောအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ကြသည်။ <ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းရန်ပြင်ဆင်မှုယန်း ၅၀၀၀၀! >
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ရှားပါးသော“ juku” ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောသော်လည်း၎င်းသည် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး စီ၏ကိုယ်ကျင့်တရား၊ နည်းပညာနှင့်ဗဟုသုတများကိုတိုးတက်စေရန်၊ အတူတကွလေ့လာရန်နှင့်သုတေသနနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးရန်၊ ငါတို့ဖောက်သည်တွေအတွက်။
Tobi အလုပ် ・ ငြမ်းအလုပ် ・ ဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ်
အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းလစဉ်လစာယန်း ၂၅၀,၀၀၀ မှ ၇၀၀,၀၀၀ ယန်း (အတွေ့အကြုံ / စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍) အတွေ့အကြုံမရှိသူလစဉ်လစာ ၂၅၀၀၀၀ ယန်း - အချိန်ပိုင်းအလုပ်စတင် - နေ့စဉ်လစာ ၇၀၀၀ ယန်း - * အတွေ့အကြုံ / စွမ်းရည် ...
■ဆိုက် - Sakado City၊ Saitama စီရင်စု၊ စီရင်စု၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ Tomigusuku City, Okinawa Prefecture, စီရင်စု၏အစိတ်အပိုင်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ * ကုမ္ပဏီတွင်စုရုံးပြီးနောက်လူတိုင်းသည် site သို့ ဦး တည်သွားမည်ဖြစ်သည်★ဆန္ဒရှိပါကအိုကီနာဝါစီမံခန့်ခွဲမှု။ ..
Kawase Juku Co. , Ltd. မှအလုပ်များဟုတ်လား
■ပုံသဏ္Formာန်လက်သမားပန်းချီ■■ `ငါတစ်ခုခုလုပ်ချင်တယ်"aလှံဖြင့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ် "နောက်လာမည့်အချိန်တွင်တက်ချင်သည် you သင်၌ထိုသို့သောခံစားချက်များရှိပါကသင့်အားချက်ချင်းအင်အားတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ဆံမည် will
၎င်းသည်သူတို့၏အသက် ၃၀ ကျော်စစ်ပြန်များကိုဗဟိုပြုသည့်တောက်ပသောအလုပ်ဖြစ်သည်။အကြွေးသည်ပထမ ဦး စားပေးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။ အဖွဲ့လိုက်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဘုယျအထွေထွေကန်ထရိုက်တာများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှအလုပ်သမားများကိုလက်ခံရရှိသည်၊
လစဉ်ယန်း ၂၇၆,၀၀၀ ယန်းမှ ၄၃၇၀၀၀ ယန်း (အတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍) ●နေ့စဉ်လစာ - ၁၂၀၀၀ ယန်းမှ ၂၁၀၀၀ ယန်း) စမ်းသပ်ကာလနေ့စဉ်လစာယန်း ၁၁၀၀၀ ~ (နေ့စဉ်လစာကိုစွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍) * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည် ...
5-2-2 Hizaoricho, Asaka City, Saitama Prefecture ●ကန်တိုinရိယာအတွင်းနေရာများစွာရှိသည်။
Ueno Construction Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
Kuei စီမံကိန်းရုံး GK
ပစ္စည်းကိရိယာဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း။ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စီးပွားရေးချဲ့ထွင်မှုတို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူလူသစ်စုဆောင်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၏အစမှအဆုံးအထိလုပ်ငန်းသည်အနှောင့်အယှက်ကင်းမဲ့စွာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကြောင့်သင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကတိပေးသည်။
အရည်အချင်းအမျိုးမျိုးရှိသောအတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို ဦး စားပေးကုသမှုပေးလိမ့်မည်။အတွေ့အကြုံနည်းသောသူများပင်လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းအခြေခံနှင့်ကိရိယာများအသုံးပြုနည်းကိုသေချာစွာသင်ကြားလိမ့်မည်။သင့်တွင်အရည်အချင်းမရှိသော်လည်း၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်စနစ်ရှိကြောင်းသင်စိတ်ချနိုင်သည်။အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းများတွင်လူမှုဖူလုံရေးအာမခံနှင့်အပိုဆုကြေးများရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်စိတ်ချလက်ချအနားယူနိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးတည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေကိုအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ငါတို့သည်လည်းအလုပ်အမှုဆောင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေသည်။
[စက်အမျိုးမျိုးကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား]  နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀၀ ယန်း ~ * အတွေ့အကြုံရှိပြီးအတွေ့အကြုံမရှိသောလုပ်ငန်းခွင်အလုပ်အတွက် ၂  နေ့စဉ်လစာ ၁၁၀၀၀ ယန်း ~ * လက်စွပ်ဖြင့်အလုပ် ...
[တည်နေရာတည်နေရာ] Chiba စီရင်စုတွင်နေရာများစွာရှိပြီးတိုကျိုရှိနေရာများ၊ Saitama အရှေ့ပိုင်းစီရင်စုနှင့်အခြားမြို့ပြဒေသများရှိသည်။ [အစည်းအဝေး ...
Kuei စီမံကိန်းရုံး GK Jobsဟုတ်လား
Saiyu Kogyo Co. , Ltd.
[Tobi / Scaffold / သံမဏိ ၀ န်ထမ်း] အတွေ့အကြုံမရှိသူများနှင့်အလုပ်ပြောင်းသည့်အဖွဲ့များကိုလည်းကြိုဆိုပါသည်။ work အလုပ်ပုံစံရွေးချယ်မှု◎ကြွယ်ဝသောသက်သာချောင်ချိရေး K Koshiya's Tobi "Saiyu Kogyo" တွင်အတူတကွအလုပ်လုပ်လိုပါသလား။
■ငါပျော်တယ်ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူသည့်ငွေပမာဏယန်း ၅၀၀၀၀ (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့်) ■ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ပြုသောငွေများရှိသည်။တစ် ဦး တည်းသောမိသားစုများနှင့်မိသားစုများအတွက်အဆောင်များ (ညှိနှိုင်း။ ရသော) များကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆောင်အခကြေးငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုယူဆောင်သွားပါမည်။ ထို့ကြောင့်သင်အဝေးတွင်ရှိနေလျှင်သို့မဟုတ်သင်၏နေ့စဉ်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ..ထို့အပြင် ၀ န်ထမ်းများ၏မိသားစုပွဲများ (ဥပမာအားဖြင့်ကလေးများအတွက်အားကစားတွေ့ဆုံခြင်း) တွင်သင်အားလပ်ရက်တစ်ရက်ယူရန်အကြံပြုပါသည်။ သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။သင်ဝင်ငွေရရှိလိုပါသလားသို့မဟုတ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုမြတ်နိုးသည်ဖြစ်စေ - သင်၏အလုပ်ပုံစံကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ သင့်တွင်“ ကျွန်ုပ်သည်များပြားသောဝင်ငွေများရလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တနင်္ဂနွေနေ့များတစ်ရက်တည်းသာနားစွင့်ရမည်” (သို့)“ ဆက်တိုက်အားလပ်ရက်များအတွက်လျှောက်ထားပြီးခရီးထွက်ခြင်း” စသည့်တောင်းဆိုမှုများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏အရည်အချင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ဟုတ်ပါတယ်, အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းသည်သင်၏လစာတိုးမြှင့်မှုနှင့်သင်ခန့်အပ်ထားသည့်အလုပ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
Tobi / ငြမ်းဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်း (သံမဏိကိုယ်ထည် / PC / ငြမ်း)
■အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်လစာ - ယန်း ၁၅၀၀၀ မှ ၁၉,၀၀၀ ယန်း (သို့) ထိုထက်မက (အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သုံးသပ်ပါမည်) ■အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်လစာ - ၁၂၀၀၀ ယန်း ~ * ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းကာလ ၃ လ ...
[ရုံးခန်း] 8-38-21 Higashi-Koshigaya, Koshigaya-shi, Saitama ဆိုက်သည်တိုကျို၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခု၊ Saitama စီရင်စုကဲ့သို့သောကန်တိုဒေသတစ်ဝိုက် (ထိုနေရာကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်တိုကျိုတွင်လည်းဖြစ်နိုင်သည်)
Saiyu Kogyo Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
Lifetime Kogyo Co. , Ltd. အတွက်အလုပ်များဟုတ်လား
ဗိသုကာဆိုင်ရာပန်းချီရေးဆွဲသော ၀ န်ထမ်းများ★အားလပ်ရက်များ★ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသောဆရာများ★မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။၀ င်ငွေရလိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စီမံကိန်းများစွာရှိပြီးတည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေကိုကတိပေးသည်။အခြားကုမ္ပဏီများ (သို့) မတူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ၌အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပြောင်းလဲသောသူများကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းကူညီသည်။
★ဗိသုကာပန်းချီ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း။အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု!အစပြုသူများကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။၀ န်ထမ်းများကသင့်အားကြင်နာစွာနှင့်ယဉ်ကျေးစွာလမ်းညွှန်လိမ့်မည်ဟုသင်စိတ်ချနိုင်သည်။၎င်းသည်အမျိုးသားများရောအမျိုးသမီးများပါပါတက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်သည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးပြုလုပ်ပါကသင်အဆင့်မြင့်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေသည်။
[ကုမ္ပဏီ] ပန်းချီ ၀ န်ထမ်း << အတွေ့အကြုံမရှိ >> အတွေ့အကြုံရှိသော◆နေ့စဉ်လစာ ~ ၁၈၀၀၀ ယန်းအထိအတွေ့အကြုံ◆ [အလုပ်သင်) နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်းစတင်★★အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုစဉ်းစားသည်။
4-9-78 Shimoniikura, Wako City, Saitama Prefecture Wako City, Saitama Prefecture, Asaka City, Niiza City နှင့်အခြားစီရင်စု၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်တိုကျိုရှိရပ်ကွက် ၂၃ ခု။
အလုပ်ရှာဖွေခြင်းကိုကူညီခြင်း!Corona ကိုမဆုံးရှုံးပါနှင့်!ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်နှင့်အတူများစွာသောစီမံကိန်းများနှင့်တည်ငြိမ်သောဝင်ငွေ!အရည်အချင်း☆၎င်းသည်သင်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု♪ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့် ၀ န်ထမ်းများမလုံလောက်ခြင်း young လူငယ်များအားတက်ကြွစွာငှားရမ်းခြင်း》 ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်ပြန်များနှင့်ကွက်လပ်များကိုကြိုဆိုသည်။ ★
★☆★ကုသမှုအပြည့်အစုံ၊ သက်သာချောင်ချိရေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသောလုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ★☆★◆လူမှုအာမခံချက်ပေးသည်◆တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်အပိုဆု◆◆ပုဂ္ဂလိကအခန်းတွင်းရှိ house ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ မသေချာမရေရာမှုများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သငျသညျတစုံတခုကိုနားထောငျနိုငျ, ဒါကြောင့်အမှားအယွင်းများအသစ်နှင့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုယူရန်မကြောက်ပါနဲ့!
[ကုမ္ပဏီ] [က] ◆မြေကြီးဆိုင်ရာအလုပ် [ပုံမှန်လုပ်သား] မိလ္လာပိုက်လိုင်းများ၊ ပြုပြင်ခြင်း * အတွေ့အကြုံမရှိသူများသည် OK လည်းရှိသည်။
[ကုမ္ပဏီ] [က] ◆နေ့စဉ်လစာသည် ၁၂၅၀၀ ယန်းမှစတင်သည်။ * အတွေ့အကြုံ / စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း ced အတွေ့အကြုံရှိသူမြင့်မားသောလစာ ဦး စားပေးကုသမှု◇★အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဆုံးဖြတ်သည်★အမြတ်များစွာရရှိလိုသူများ၊ များစွာသောစီမံကိန်းများစွာ ...
ရုံးရှေ့မှာစုရုံးပြီးတဲ့နောက်တိုကျိုရပ်ကွက် ၂၃ ခုမှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုစီကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်။
Honey Badger ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Formwork လက်သမား (လက်သမားအလုပ်သင်) စုဆောင်းမှု!ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းတစ်နှစ်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောတည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြိုးစား။ ငွေအမြောက်အများရရှိနိုင်သည်။ငါသည်သင်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မည်!ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရ!
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းတစ်နှစ်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောတည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြိုးစား။ ငွေအမြောက်အများရရှိနိုင်သည်။ငါသည်သင်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မည်!ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါရန်အခမဲ့ခံစားရ! * အလုပ်ချိန်သည်ဆိုက်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
■နေ့စဉ်လစာ [အတွေ့အကြုံရှိသူ] ၁၈၀၀၀ ယန်း (သို့) ထိုထက်မက [အတွေ့အကြုံမရှိသူ] ယန်း ၁၀,၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို * စွမ်းရည်နှင့်အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်သည်။
Honey Badger ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုဟုတ်လား
Oshiro Construction Co. , Ltd. ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဟုတ်လား
Tobi Nitta Gumi ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Tobiko ◇အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လစာ ၁၉၀၀၀ ~ thousand အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော ၁၄၀၀၀ စတင်★ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများရှိအလုပ်များပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်း!သင်သည်သင်၏အလုပ်နှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်နယ်ပယ်သစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေပါကစိတ်မပူပါနှင့်။★အပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသည့်အဆောင်ကိုအဝေးကနေလျှောက်ထားရန်ကြိုဆိုပါသည်
၀ န်ထမ်းအများစုသည်အတွေ့အကြုံမရှိသူများမှစတင်သည်။ကြင်နာခြင်း၊ ယဉ်ကျေးခြင်းတို့ဖြင့်သင့်ကိုတစ်ယောက်ချင်းစီလမ်းညွှန်ပေးပါမည်။သင်နားမလည်တဲ့အရာတွေ၊ စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့အရာအားလုံးကိုမေးနိုင်တဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်မရှည်ပါနဲ့၊ အမှားလုပ်မိပြီးစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့!
[ကုမ္ပဏီ] [က] o တိုကို ၀ န်ထမ်းများ▪အတွေ့အကြုံရှိသူ - နေ့စဉ်လစာ ၁၉၀၀၀ ယန်း ~ experience အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်း စား၍ အထူးကုသမှု▪အတွေ့အကြုံမရှိ - နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၄၀၀၀ ~ ◇◇◇လစဉ်လစာဥပမာ◇◇◇▪ ...
Koshiya City၊ Saitama စီရင်စု၊ တိုကျို၊ Chiba၊ Kanagawa၊ Ibaraki စသည့် ၂၃ ခုရပ်ကွက်။
Tobi Nittagumi Co. , Ltd. မှအလုပ်များဟုတ်လား
Kojima Gumi ကုမ္ပဏီလီမိတက်
[Tobi လက်မှုပညာရှင်များကိုခန့်အပ်ခြင်း] အလွန်ကောင်းသည့်အသင်းအဖွဲ့!ဒါဟာသက်သောင့်သက်သာအလုပ်လုပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါ။ [အတွေ့အကြုံရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောလူများအတွက် ဦး စားပေးကုသမှု] inex အတွေ့အကြုံမရှိသူများထံမှအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါ။သင်ကအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်တောင်အဲ့လိုခံစားမိရင်ကောင်းလိုက်တာ!သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်။
inex အတွေ့အကြုံမရှိသောအလုပ်တစ်ခုရရန်။သင်ကအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်တောင်အဲ့လိုခံစားမိရင်ကောင်းလိုက်တာ!သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်။ပထမ ဦး ဆုံးအကြာင်းအလုပ်သင်သည်အလုပ်သင်နှင့်စတင်ပါလိမ့်မည်။သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်ဟုစိတ်ချပါ။ age groups အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးအုပ်စုများသည်တက်ကြွစွာပါဝင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှအသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိ [20s-60s] များသည်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ကြသည်။အတွေ့အကြုံရှိသောသူတို့သည်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုကိုပြင်ဆင်မည်။သင်၏စွမ်းရည်တိုးတက်လိုလျှင်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေပိုမိုရရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
①ငြမ်းတပ်ဆင် / disassembly အလုပ်သမား
①နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ မှ ၁၇၀၀၀ ယန်း (လက်မှုပညာ) / ၁၀၀၀၀ ယန်း (အလုပ်သင်)
Chichibu, Hanno စသည်တို့
8-91 Kasanui၊ Hanno City, Saitama Prefecture တိုကျိုမြို့၊ Saitama စီရင်စုရှိအလုပ်အကိုင်နေရာများ၊
Kojima Gumi Co. , Ltd. ဂျော့ဘ်ဟုတ်လား
General Interior Co. , Ltd. အတွက်အလုပ်များဟုတ်လား
Cogrove Co. , Ltd. အတွက်အလုပ်များဟုတ်လား
Hagiwara Shoji Co. , Ltd.
[မိလ္လာပိုက်လိုင်းဆောက်လုပ်ခြင်း / ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းများ] အတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက် ဦး စားပေးကုသမှု!အတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုကြိုဆိုသည်။၎င်းသည်အဆင်ပြေသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏အကောင်းဆုံးကိုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ငွေအမြောက်အများရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏အကောင်းဆုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်တိုးတက်မှုကိုသင်ခံစားရနိုင်သည့်အလုပ်ခွင်တစ်ခုဖြစ်သည် (^^)
●ရေနံပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေပိုက်များတင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ လမ်းခင်းခြင်းစသည့်နေရာများအတွက် ၀ န်ထမ်းများ။
●တိုကျိုဆင်ခြေဖုံးရှိနေရာတစ်ခုစီ၊ အဓိကအားဖြင့်တိုကျို၊ အဒရှီကူ။ * ကျွန်ုပ်တို့သည် Yashio ရုံးတွင် (၆၀၁-၁၊ အူဇုန်၊ ယာရှီယိုစီးတီး) နှင့်တွေ့ဆုံပြီးထိုနေရာကို ဦး တည်သွားပါမည်။
Hagiwara Shoji Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Tobiken Co. , Ltd.
[ငြမ်း] [မြေကြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း] [ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားများ] အတွေ့အကြုံနည်းပါးသောလူများကိုကြိုဆိုသည်။လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်များသည်လည်းများစွာရှိပါသည်။ !!
Sc [ငြမ်း] ② [မြေကြီးဆိုင်ရာအလုပ်] ③ [ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား]
①ငြမ်း (အလုပ်သင်) [လစဉ်လစာ] ၂၈၈၀၀၀ ယန်း (သို့) ထိုထက်မက②မြေကြီးလုပ်ငန်း၊ ③ကျွမ်းကျင်သူလုပ်သား [နေ့စဉ်လစာ] ၁၂၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ယန်း * အမျိုးမျိုးသောစရိတ်များနှင့်အချိန်ပိုလစာ
[ရုံး] 1169-1 Takahagi, Hidaka City, Saitama Prefecture - ဆaitamaစီရင်စု၊ တိုကျို၊ ကန်နာဂါဝါ၊ ချီဘ၊ ဂွန်မားစသည့်နေရာများရှိသည်။
Tobiken Co. , Ltd. မှအလုပ်များဟုတ်လား
ခေါင်မိုး / အပြင်ပန်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသောလက်မှုပညာရှင်များကိုခေါ်ယူခြင်း။အလုပ်သင်များကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။
①ခေါင်မိုး / ပြင်ပပုံစံပြုပြင်ခြင်း②ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု③လုပ်ငန်းတာ ၀ န် (စာချုပ်)
(၁) အိမ်ခေါင်မိုး / ပြင်ပပြုပြင်ခြင်းလက်မှုလုပ်ငန်း၏နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀၀ မှ ၃၀,၀၀၀ ယန်း (အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း) (၂) ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလစဉ်ယန်း ၂၅၀,၀၀၀ မှ ၄၀၀,၀၀၀ ယန်း (အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုသုံးသပ်ခြင်း) ...
ယင်းသည် Wakaba ရပ်ကွက်၊ Chiba မြို့၊ Chiba စီရင်စု၊ Soka City၊ Saitama စီရင်စု၊ တိုကျိုရှိ ၂၃ ရပ်ကွက်၊ Yokohama City၊ Kanagawa စီရင်စု၊ Toride City၊ဌာနချုပ် Chiba စီးတီး, Chiba စီရင်စု Waka ...
Takemi Home Co. , Ltd. မှအလုပ်များဟုတ်လား
ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု / လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြပ်မှု
[လစဉ်လစာ] ယန်း ၂၅၀,၀၀၀ မှယန်း ၅၀၀,၀၀၀ * အတွေ့အကြုံမရှိသူ - နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀၀ ယန်း ~ (စမ်းသပ်ကာလ) * တစ်လလျှင်ပျမ်းမျှအလုပ်လုပ်ရက် - ၂၁.၁ ရက် * လစာတိုး * အပိုဆုကြေးရရှိနိုင်
တိုကျို၊ ကန်နာဂါဝါ၊ Yamanashi၊ Saitama၊ Gunma၊
စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်း!အစပြုသူများကိုကြိုဆိုသည်။လှုံ့ဆော်မှုပေါ်မူတည်။ မြင့်မားသောဝင်ငွေ! [လိုင်စင် ၂၆၀,၀၀၀ မှလစဉ်] သာမန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူများကိုကြိုဆိုပါသည်။ငါကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်လစာကိုအကဲဖြတ်မယ်။အချိန်မရွေးငွေပေးချေမှု!
ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် site န်ထမ်းများ / ခေါင်မိုး / အပြင်ဘက်မြို့ရိုးလက်သမား
လစဉ်လစာ 26 ယန်း ~ ★လိုအပ်သည့်အတိုင်းမြှင့်!အလုပ်ကြိုးစားမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း★ * သင်တန်းကို ၃ လအထိပြုလုပ်နိုင်သည်။ နေ့စဉ်လစာမှာယန်း ၉၀၀၀ ဖြစ်သည်။ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်စဉ်းစားလျက်ရှိသည်။ [ကော်မတီ] ခေါင်မိုး / အပြင်နံရံ ...
Gyoda City, Saitama စီရင်စု၊ စီရင်စု၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ တိုကျို (အနောက်ပိုင်းတိုကျို) ၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခု၊ တောင်ဘက်ဂွန်မားစီရင်စု၏အပြင်ဘက်တွင်
[အတွေ့အကြုံမရှိသူ] နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ [အတွေ့အကြုံရှိ] နေ့လစာ ၁၃၀၀၀ - ၂၁၀၀၀ ယန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်မက * အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းနှင့်စွမ်းရည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။
Nerima ရပ်ကွက်၊ Itabashi ရပ်ကွက်၊ Toshima ရပ်ကွက်၊ တိုကျိုဆင်ခြေဖုံးနှင့် Saitama စီရင်စုရှိနေရာတစ်ခုစီ!များစွာသောဆိုဒ်များရှိပါတယ်!ဒါဟာဖြောင့်သွားနှင့်ဖြောင့်သွားကြဖို့ OK ကိုဖြစ်ပါတယ်
Sanken Co. , Ltd
အလုပ်များသောကြောင့်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း။၎င်းသည်အတွေ့အကြုံရှိပြီးအတွေ့အကြုံမရှိသူများပါတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးအလုပ်များစွာကိုမလုပ်ကိုင်ဘဲငွေအမြောက်အများရရှိနိုင်ပါသည်။အဆောင်လည်းရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကြိုတင်တိုင်ပင်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သက်တောင့်သက်သာအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။
▼နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၅၀၀၀ နှင့်အထက် * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။
▼ Koshigaya City, Saitama စီရင်စုမှတိုကျိုနှင့်ကန်တိုဒေသတစ်လျှောက်ရှိနေရာတစ်ခုအထိ * ကား / ဆိုင်ကယ်စီး။ သွားနိုင်သည်
Sanken Co. , Ltd. မှအလုပ်များဟုတ်လား
T2WALL Co. , Ltd.
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်များကိုပြောင်းလဲလျှင်သင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်★အလုပ်သင်ဖြစ်နိုင်★★ Siding ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ထမ်း★ Delivery ယာဉ်မောင်း (2tMT ကား) သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
[ကုမ္ပဏီ] ①②◆အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၂၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ယန်း◆အတွေ့အကြုံမရှိသူနေ့စဉ်လုပ်ခယန်း ၉၀၀၀ ~ (လိုအပ်သည်) * အသေးစိတ်အင်တာဗျူးများ၊ အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းများနှင့်စွမ်းရည်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။
Saitama စီရင်စုနှင့်ကန်တို*ရိယာ * တိုက်ရိုက် / ရနိုင်သောရရှိနိုင် (ညှိနှိုင်းမှု) ★အစည်းအဝေး / မျှဝေသည်
T2WALL Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Kasuga Sangyo Co. , Ltd.
အစပြုသူများကိုကြိုဆိုပါတယ် (ပညာရေးနောက်ခံနှင့်အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ။ ) သင်သည်ထိန်းသိမ်းထားမှုနှုန်းနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာစွမ်းရည်အနည်းငယ်ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်လိုပါသလား။အရည်အချင်းပြည့်မှီသောဝယ်ယူမှုအထောက်အပံ့စနစ်လည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
ပစ္စည်းကိရိယာကြီးကြပ်မှု / အလုပ်ဝန်ထမ်းများ
လစဉ်ယန်း ၃၀၀၀၀၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်မကသောလစာ * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
တိုကျို၊ Saitama City၊ Saitama စီရင်စု၊ Kawaguchi စီးရီး ၂၂ ခု၊ Itabashi ရပ်ကွက်အပေါ်ဗဟိုပြု
Kasuga Sangyo Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
Arekuto Co. , Ltd.
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမလိုအပ်ပါ။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ထမ်းများ☆လစဉ်ဝင်ငွေ ၃၀၀,၀၀၀ မှ ၅၈၀,၀၀၀ ယန်း★ကုမ္ပဏီ၏အိမ်ရာရရှိနိုင်သည်☆အပတ်စဉ်ရုံးပိတ်ရက်များ ၂ ရက်♪အပတ်စဉ်ရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်နိုင် ex အတွေ့အကြုံမရှိသောနှင့်အရည်အချင်းမရှိသော OK ☆လွယ်ကူသောအလုပ်မှစတင်ပါ။သုည - သင်သည်အလုပ်ရနိုင်သည်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတက်ကြွစွာပါ ၀ င်နိုင်သည်။ you သင်သည်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသော်လည်းပင်လစဉ်ဝင်ငွေမြင့်မားစွာရရှိနိုင်သည်။
[ကုမ္ပဏီ] ①လက်မှုပညာ - ရေစိုခံအလုပ် (တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ရေစိုခံအလုပ်) ②ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု
[ကုမ္ပဏီ] ①လက်မှုပညာ - ရေစိုခံအလုပ် [တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအလုပ်] ②ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု①②လစဉ်လစာ ၃၀၀၀၀၀ - ၅၈၀,၀၀၀ ယန်း * အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဆုံးဖြတ်သည်★စမ်းသပ်မှုကာလသည် ၂ လဖြစ်သည်☆သင် ...
တိုကျိုနှင့် Saitama .ရိယာ
, Alekto Co. , Ltd. ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဟုတ်လား
Shinmei လေအေးပေးစက် Co. , Ltd.
လေအေးပေးစက်ပစ္စည်း / ပြွန်အလုပ်
[နေ့စဉ်လစာ] ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ * ရုံးတင်စစ်ဆေးသည့်ကာလရှိသေးသည်
* ဒီ site သည်တိုကျို၊ Saitama စီရင်စု၊ Chiba စီရင်စု၊ Kanagawa စီရင်စု၊ Ibaraki စီရင်စုအစရှိသဖြင့် [Office] 125-0053-3-28 Kamakura, Katsushika-ku, Tokyo 25-310 [Factory] 〒340-0813 ..
Shinmei Air Conditioning Co. , Ltd. အတွက်အလုပ်များဟုတ်လား
●ပန်းချီဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း။သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်သင်၏လစာတွင်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။ * ကုမ္ပဏီအာမခံနှင့်လူမှုဖူလုံရေးပင်စင်ကဲ့သို့သောအာမခံလွှမ်းခြုံမှုနှင့်ပတ်သက်သောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများသည်လည်းအဆင်ပြေပါသည်။
●နေ့စဉ်လစာ [အတွေ့အကြုံမရှိသော] ယန်း ၁၀,၀၀၀ ~ စတင် [အတွေ့အကြုံရှိသူ] ယန်း ၁၄၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မက * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့အညီငါတို့လစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။ ...
● Saitama စီရင်စု၊ Kawagoe City ကိုဗဟိုပြုသည့်ဆင်ခြေဖုံးနေရာများ
မြေလုပ်ငန်း / အထွေထွေ (46)
သံမဏိကိုယ်ထည် / လေးလံသောအလေးချိန် (12)
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ / ဗိသုကာ (91)
အလုပ်သင် / အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုခြင်း (87)
လူမှုဖူလုံရေးအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသည် (83)
သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေမှာ "Saitama စီရင်စုဒါဟာ "ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအခြေအနေများကိုပြောင်းလဲလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ "အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်အခြေအနေများပြောင်းလဲခြင်း" ကိုနှိပ်ပါ။
ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုအခြေအနေအတည်ပြုချက် / ပြောင်းလဲမှု
.ရိယာ　 ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါ တိုကျိုTaito / Adachi / Sumida / EdogawaTeshima / Shinjuku / Shibuya / SuginamiChiyoda / Minato / Shinagawa / DaejeonFuchu / Mitaka / KiyoseTachikawa / Kokubunji / AkishimaMachida / HachiojiOme, Akiruno, etc Kanagawa စီရင်စုYokohama / KawasakiSagamihara / EbinaFujisawa / Kamakura / YokosukaAtsugi / HiratsukaOdawara, Minamiashigara, etc Saitama စီရင်စုSaitama, Toda, KawaguchiKoshigaya, Soka, MisatoKuki, Kumagaya, HonjoKawagoe, Tokorozawa, SayamaChichibu, Hanno စသည်တို့ Chiba စီရင်စုMatsudo / Kashiwa / NagareyamaIchikawa / Funabashi / UrayasuNarita / Inzai / ChoshiChiba / Ichihara / Mobara မြောက်ကိုရီးယားIbaraki စီရင်စုTochigi စီရင်စုGunma စီရင်စု ရွှေ့ပြောင်း / ဒေသAomori စီရင်စုNagasaki စီရင်စု
အလုပ်အကိုင်　 ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါ မြေကြီးအလုပ် / အထွေထွေအလုပ်ပုံသဏ္workာန်လက်သမားငြမ်းနှင့်ငြမ်းသံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်လေးလံသောအလေးချိန်မှင် / စစ်တမ်းOrbiterကျောက်ခင်းလမ်းမြေပြင်တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းMulti- ကျွမ်းကျင်လုပ်သားစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့အလုပ်သမားလက်ဝါးကပ်တိုင်အလုပ်ကြမ်းပြင်အလုပ်ဟာ့ဒ်ဝဲအလုပ်သမားအိမ်ရာကိရိယာများ / ပရိဘောဂတပ်ဆင်ခြင်းအတွင်းပိုင်းဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ် ပန်းချီဆရာပန်းချီဆရာရေစိုခံALC အလုပ်ခေါင်မိုး / စာရွက်သတ္တုအလုပ်အင်္ဂတေကြွေပြားများမီးခံ / insulator တွင်လည်း လက်သမားဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ်Formwork ဖျက်သိမ်းအလုပ်ဘားအားဖြည့်စုပ်ပန်းပဲ / ဂဟေဆော် ချီစက်အော်ပရေတာအခြားအကြီးစားစက်ကိရိယာများ (တူးဖော်စက်၊ ယumbo၊ mixer) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကား (အကြီးစား / အလတ်စား, etc)ဗိသုကာထရပ်ကား (dump truck)လေယာဉ်အမှုထမ်း (ဘတ်စ်ကား၊ တက္ကစီ၊ မောင်းနှင်ဝန်ဆောင်မှု)အခြားယာဉ်မောင်းများ ရှုခင်းပြင်ပအလုပ်အုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအလုပ်လူနေအိမ်မြေဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း လျှပ်စစ် / ဆက်သွယ်ရေးလုပ်သားလေအေးပေးစက်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင် / ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုPiper ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုက်ဒါရိုက်တာ Forklift အော်ပရေတာညီလာခံ / အပြောင်းအလဲနဲ့ဂိုဒေါင်ထဲမှာအလုပ်လုပ် ယာဉ်အသွားအလာလမ်းညွှန်လုံခြုံရေး ကားတစ်စီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသန့်ရှင်းရေးအလုပ်အလုပ်ချအရောင်းရုံးအလုပ်အဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှု
အလုပ်အကိုင်　 ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါ အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းကန်ထရိုက်တာ ၀ န်ထမ်းအချိန်ပိုင်းအလုပ်အပိုင်းအပ်နှင်းကန်ထရိုက်စာချုပ်
အမျိုးအစား ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကားမောင်းသူလုံခြုံရေးစက်ရုံဒီလိုမှမဟုတ်ရင်
ရွှေ့ပြောင်း / ဒေသ
© 2019-On-site အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး site ကို Genvers